Hoggaamiye Kuxigeenka Daacishta Soomaaliya oo lagu dilay duqey... | Universal Somali TV
Hoggaamiye Kuxigeenka Daacishta Soomaaliya oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Bari.
Wararka ka imanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in duqeyn culuc oo dhinaca Cirka ah duhurnimadii maanta ay ka dhacday tuulada Xiriiro ee 3 KM u jirta degmada Isku Shuban ee gobolka Bari, sidaas waxaa sheegay mas’uuliyiinta amniga Puntland.
Sida wararku sheegayaan duqeynta waxaa geysatay diyaaradaha Mareykanka, kuwaasoo Saddex gantaal ku dhuftay gaari yar oo nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen Hoggaaminyayaal katirsan Kooxda Daacish ee ka dagaalanta deegaanada Puntland.
Wasiirka Amniga maamulka Puntland C/ Samad Maxamed Gallan ayaa Warbaahinta gudaha u xaqiijiyay in duqeyntaas lagu dilay Cabdixakiin Dhoqob oo ah Kuixgeenka Hoggaamiyaha ugu sareeya Daacishta Soomalaiya, warar kale waxa ay sheegayaan in sidoo kale duqeynta uu ku dhintay Sarkaal kale oo Daacish ah.
Mareykanka ayaa beegsada saldhigyadda Al­Shabaab iyo Daacish si lamid ah gaadiidka ay ku socdaalayaan xubnaha ama horjoogayaasha ururadaasi, Xukuumada cusub ee hogaamiyo Madaxwayne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa balanqaaday in ay cagta marin doonto xoogagaas, isla markaana amniga Puntland ay siin doonto ahmiyadda koowaad.
Kan-xigaGuddiga madaxa Banaan ee doorashada o...
Kan-horeRaiisul Wasaare Kheyre oo ka qeyb gal...
53,450,378 unique visits